facebook group များသတိထားပါ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » facebook group များသတိထားပါ။
facebook group များသတိထားပါ။
Posted by ရွှေအိမ်စည် on Nov 6, 2012 in Copy/Paste | 12 comments
other website been hacked and take over the ownership around last few days.
သင့် ဖေ့ဘုတ်အကောင့် အဟက်မခံရစေရန်…
by ကွန်ပျူတာနည်းပညာ on Wednesday, October 17, 2012 at 10:29am ·
by ကွန်ပျူတာနည်းပညာ http://www.facebook.com/pages/%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%B4%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC/103677483111876
ကျနော်ဖေ့ ဘုတ်မှာသူငယ်ချင်းတွေ ထိတာတွေပါ။
ရွာထဲ ကလည်းကျနော်လိုဘဲ ဂရုတွေ ၇ှိရင်သတိပေးတာပါ။
ရွှေအိမ်စည် ပြောတာဟုတ်ပါတယ် အဲ့ဒီလို ဂရု အက်မင်တွေ သိမ်းခံ ရတာ အများဆုံး ကတော့ Phishing မိလို့ ပါ FireFox browser သုံးတဲ့ သူတွေအတွက်တော့ FireFox Plugin လေးသုံးစေချင်ပါတယ် အဲ့ဒါကတော့ Facebook Phishing protector လေးပါ စိတ်ချရပါတယ် သုံးကြည့်ကြပါနော်…။ ကျွန်တော်မူရင်းလင့်ပဲပေးမှာပါ စိတ်ချပါ…
ကျွန်တော့် Facebook Account အဟောင်းကတော့ Report ထိတာများလို့Facebook Admin Team က ဖျက်ပြစ်လိုက်ပါပြီ … ကံဆိုးချင်တော့ account အသစ်ဖွင့်ပြီး သုံးတာလဲ ရက်ပိုင်းပဲခံပါတယ် ထပ်ဖျက်ခံရပါတယ်…. အကောင့် ၂ ခုလုံးကို ပြန်ရအောင်လုပ်နေပါတယ် ဒီထဲမှာ နည်းပညာ သမားတွေတော်တော်များများရှိတယ်လို့ ထင်ပါတယ် ကူညီနိုင်ရင် အကြံပေးနိုင်ကြပါတယ်..
ကို Alpha Vanishing ရေ ။
အဘ ထင်တာပြောကြည့်မယ်နော် ၊
ကိုရင်တို့ Hacker သမားတွေက FB ပေါ်မှာ ၊
ဘယ် Site ကို ဘယ်တော့ တိုက်ကြမယ်တို့ ။
ငါတို့ ချလိုက်တာ ဘယ် Site ဒေါင်းသွားပြီတို့ ။
အဲဒါတွေကို Status တင်နေလို့ဖြစ်မယ် ။
ကိုရင်တို့က အဲဒီ Status ကိုပြန်ဖျက်ရင်တောင် ( FB မှာတော့ Record ကျန်နေမှာပဲ ) ၊
ဟိုဖက်က လူတွေက Screen Shot ဖမ်းထားပြီး FB ကို သတင်းပို့ရင် Account ပိတ်ခံရမှာပဲ ။
နောက်ပြီး နာမည်ကြီး Hacker တွေ တပြုံကြီး နှင့် Friend လုပ်ထားလို့လဲ ဖြစ်နိုင်တယ် ။
FB အဖွဲ့မှာ မြန်မာစာတတ်တဲ့သူတွေလည်း ခန့်ထားမှာပဲ ။
သူတို့ ( FB အဖွဲ့ ) က ကိုယ့်ရဲ့ Message တွေကိုလည်း Scan လုပ်မှာ သေချာတယ် ။
အခုခေတ်က ဓါတ်ပုံတွေကိုတောင် Scan / Search လုပ်နေကြတာ ။
အကောင့်ဟတ်တာက အသစ်ပြန်ထောင်နိုင်တယ်…ဂရုတစ်ခုရဲ့ မန်ဘာရဖို့ ဆိုတာက ခက်ခဲပါတယ်….အဓိကက ဂရုတွေဘဲလိုက်ယူတတ်တယ်
ဆိုပါစို့ အခု ကျနော်သူငယ်ချင်းတွေ ဂရုပါပုံပါနည်းလေးပေါ့….
ကိုယ့်နဲ့ အတူပိုစ့်ရှလ်ြတယ်….နိုင်ငံရေး…ကိုတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်လုပ်နေတာ…အမည်တခု ကခိုင်လင်း….နဲ့ ……ကိုယ့်ကလည်းသူစာတွေတင်တယ်..တဖြေးဖြေးယုံလာတယ်….၂လ ကအများဆုံးဘဲ..သူကို ကိုယ့်ဂရုမှာအက်ဒမင်ပေးလိုက်တယ်……ခိုင်းလင်းဘဲ..သူမှာနောက်အကောင့်တစ်ခုခင်ခင်သော်ဆိုပါစို့ ….ခိုင်လင်းက အက်ဒမင်ပြန်ပေးတယ်…ခင်ခင်သော်ကဘဲ ..အက်ဒမင်အားလုံးဖြုတ်ပြီးအပိုင်သိမ်းပြီး…၇၈၆ အလံတင်ရော…….ကဲ..
ခိုင်လင်းက နိုင်ငံရေးကိုယ်နဲ့ လုပ်နေတုံးဘဲ….
ကျနော်ရှာတွေ့ တဲ့ ပုံနော်…….တိုင်းရင်းသားဆိုတဲ့ ဂရုမှာ….
ကျေးဇူးပါ အဘဖော ရေ
ကျွန်တော့်အကောင့်အဟောင်းကို အခုလေးတင်ပြန်ပြီး recovery လုပ်နိုင်ပါပြီ
အဓိကဖြစ်တာကတော့ ip hide ပြီး fb ကို သုံးလို့ ပါတဲ့ ကျွန်တော့ browser က ၅ မိနစ်တစ်ခါ ip change နေလို့lock ချခံရတာပါ
ပြီးတော့ ဆက်သွယ်ရေးက ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေကြမ်း ထုတ်ပြန်တယ်ကြားတယ် isp provider ကလည်း hacker တွေက http://www.mictpark.com နဲ့ 
http://www.mcpamyanmar.org တို့ လို ဆိုဒ်မျိုးတွေ ကို hack ပြီး defacing လုပ်လိုက်တာတွေ နဲ့နောက်ဆုံး7day journal site တွေကို hack လိုက်တာတွေကို မျက်စိနောက်နေတယ်နဲ့ တူပါတယ်ဗျာ
ကျေးဇူးပဲ ကို Alpha Vanishing ရေ ။
IP Address ကို ခဏခဏ Change နေရင် ၊
Face Book Account ကို lock ချခံရလိမ့်မယ် ဆိုတာကို သိလိုက်ရလို့ ။
အဲ့ကောင်တွေမှာ လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်စရာဆိုလို့၊ ဒီဖေ့ဘုတ်မှာ လိုက်ဟက်တာပဲကျန်မှာဆိုတော့ ၊ မရွှေ ပြောသလို ဂရုစိုက်ကြပါဗျို့ 
သတင်းကို ပြောပြပေးလို့ ကျေးကျေးပါ
ဒါလေးတွေ မှတ်ထားလိုက်ပါတယ်ဗျာ ..
ကြိုတင် ကာကွယ်ရအောင်လို့ …
အမရေ..ဖေစ့်ကို ကာကွယ်ဖို့ဗဟုသုတ မို့ ကျေးဇူးများစွာနဲ့ မှတ်သားသွားပါတယ်….
အော် … ကြွက်မနိုင် ကျီ မီးနဲ့ရှို့ ….
… အနိစ္စ …
+++ဆရာ ဟတ်ကြီးကို (ကျနော် သူငယ်ချင်း နာမည်နော။ အထင်ကြီးတွေလွဲမှာစိုးလို့) အားကိုးပါရစေ။ ကျနော်ဟာလေး ပြန်ရအောင် ကူညီပေးပါဂျာ။
+++အေး…မင်းတောင့်တာလွန်းလို့ ငါကိုယ်ထင်ပြရတာကွ… ငါလဲဖွန်ကြောင်ချိန်မရလောက်အောင် တိုင်တွေပတ်နေတာ။
fb မှာထပ်ရှယ်ပေးမယ်ဗျာ ခွင့်ပြုပါ။